မလွတ်မြောက်ခြင်းမှတ်တမ်း (မတ်လ ၇ ရက်) – Gniap
စာမရေးဖြစ်ဘူး။ သတင်းဆိုးတွေ၊အိပ်မက်ဆိုးတွေကြား တနေ့တာမှာ ဘာမှကို ပြန်မတွေးချင်တော့တာလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ဒါတောင် ကျနော်တို့က တစ်လကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာလဲ အကင်းပဲ ရှိဦးမယ်။ နှစ်ရှည်လများ စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ အခြေအနေဆိုးလိမ့်မလဲ? တိုင်းရင်းသား လို့ ပြဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာ အတိအလင်းပြောထားတဲ့ လူတွေကိုတောင် နှိပ်စက်တယ် ဆိုရင် စာရင်းထဲမပါသေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်လောက်များတောင် ရမ်းကားနှိပ်စက်ပါတော့မလဲ? လူ-လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ လို့ နေ့စဥ်မေတ္တာပို့မှာ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာမှ ရက်စက်မှုတွေ သရဖူဆောင်းနေတယ်။ ဒီစာရေးနေချိန် ရန်ကုန် downtown area မှာ ညဘက် လမ်းတွေထဲအထိ ဝင်ပီး အသံဗုံး၊သေနတ်ပစ်သံတွေ ကိုယ်တိုင် ကြားရနေရပါတယ်။ ညနေ ဂန္ဒီဆေးရုံထဲကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ နေရာဝင်ယူတာကနေ လူတွေလက်မခံပဲ ဝိုင်းအုံရာကနေလဲ ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။ ရေကျော်ဘက်တွေမှာလဲ အရင်နေ့ သပိတ်အငြိုးတွေနဲ့ အရင်ရက်တွေကတည်းက ညပိုင်းတွေ ဝင်ဆွဲတာ ၊ ပစ္စည်းတွေ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်တယ်။ ညဘက်ဆို Telegram Channel တွေထဲမှာ ဘယ်လမ်းကိုတော့ ဝင်လာပါပီ ၊ ဘယ်သူ့ကို ဖမ်းသွားပါပီ ဆိုတာတွေက ဆက်တိုက်ကို တက်နေတာ ။
မနေ့ညက ဖမ်းဆီးရင်း ပန်းပဲတန်း NLD ရပ်ကျေးဥက္ကဌ ကျဆုံးသွားတယ်။ ဒီနေ့ညနေလဲ သတင်းထပ်တက်လာတာက ကိုစည်သူမောင် ရဲ့ ဖခင် ကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်တဲ့ ။ တနိုင်ငံလုံးမှာလဲ အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ကျဆုံးသူ အာဇာနည် ၅၈ ဦး ရှိပီ ။ လူမသိလိုက်ပဲ လက်စဖျောက်ခံလိုက်ရတာတွေလဲ ရှိနေမလား။ ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့ ထောင်ကျော်နေပီ ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက်လဲ နည်းမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဆန္ဒပြသူ ပြည်သူ လူငယ်တွေအတွက် အကာအကွယ်က ထဘီတန်းရယ်၊သံပြားဒိုင်းကာရယ်၊သစ်သားပြားတွေရယ် ပဲလေ။ ဒါတွေကို စစ်လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အင်အားကုန်သုံးနေရသတဲ့ ။ တကယ့် လက်နက်-လက်နက်ချင်းသာဆိုရင် ဒီကောင်တွေ ဘယ်လောက် ကြောက်မလဲပဲ။
bit.ly/myanmarspring22222 ရဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာမှာ CDM ပြုလုပ်တဲ့ ရဲ အရေအတွက် ဒေတာ ပါတယ်။ ဒီအရေအတွက် တိုးလာတာကတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အမှောင်ထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်အတိုအစ အလင်းတန်းပါပဲ။ ရဲတွေ CDM ထဲ ပါဝင်လာတာကို တချို့သူတွေက နေရာပေးကြတယ်။ တချို့သူတွေကကျလဲ တစ်လကျော်မှ သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား လို လာလုပ်ပီး ပေါင်းတာမို့ မယုံရဘူး ဆိုတာမျိုး မြင်တယ်။ ရဲတွေကိုလဲ အခြားဝန်ထမ်းတွေလိုပဲ ပုံမှန်လေးပဲ ဆက်ဆံတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သူတို့ လုံခြုံရေးအတွက်ရော ၊ ဒါသည် တနိုင်ငံလုံး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံဝန်ထမ်း ပီသတဲ့သူတွေ ပါလာတယ် လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ရုံပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက်သမားတွေဘက်က လက်နက်ကိုင်နိုင်တဲ့ အင်အား ရော့သွားတာကိုက ပျော်စရာပါပဲ။ R2P ထက်စာရင် Federal Army ကသာလျှင် အခုချိန် အဖြစ်နိုင်ဆုံးလို့လဲ ခံစားရလို့ပါ။
ဒီခေတ်ဆိုးကြီးလဲ မြန်မြန် ပီးစေချင်ပီ။ ဘာအလုပ်မှကို အာရုံစိုက်လို့ မရတာ။ ရေရှည် ဒီလို စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။